ဇက်ဗီလင်းတန်း: October 2011
Posted by ZP.LINTAN at 3:30 AM
Movie ရုပ်ရှင်ရုံသို့ SERMON
ကောင်းကင် နှင့် ငရဲ ပြဇာတ်
Posted by ZP.LINTAN at 1:09 PM
ရောက်လုသော အမေဂဒုံ စစ်ပွဲ
Posted by ZP.LINTAN at 11:28 AM
Posted by ZP.LINTAN at 8:25 AM
Posted by ZP.LINTAN at 9:48 AM
လာရောက်ကြည့်ရှုသူ အပေါ် ဘုရားသခင် ကောင်းကြီးပေးပါစေ...
Posted by ZP.LINTAN at 5:35 AM
Posted by ZP.LINTAN at 3:46 AM
Chin Music Videos စံပီး အဖွဲ့ သီချင်း
ဒါလေးကတော့ ညီငယ် တယောက် စီဗုံးမှာလာ တောင်းထားလို့တင်ပေးလိုက်တာပါ . နည်းလမ်း တွေအ များ ကြီး ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် အလွယ် ကူဆုံးပြုလုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေး ကို တင်ပြပေး မှာဖြစ်ပါ တယ်. ဘလော့ ကို အခုမှစ လုပ်တဲ့မိတ် ဆွေများအနေနဲ့ ဒီနည်းကလေးကပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
step| 1 | မိမိဘလော့ကို ဝင်လိုက်ပါ။
step|2| အောက်ကပုံလေးတွေ အတိုင်းတစ်ဆင့်ချင်း သွားလိုက်ပါ။ DESIGN
Posted by ZP.LINTAN at 3:35 AM
ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ Windows မှာပါတဲ့ Snipping Tool လေးကိုသုံးပြီးတော့အလွယ်တကူ
ဘယ်နေရာရောက်ရောက်မိမိတို့ Capture ဖမ်းချင်တဲ့ပုံကိုဒီကောင်လေးသုံးပြီးအလွယ်
တကူ Capture ဖမ်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်..။ကျွန်တော်အသုံးပြုနည်းလေးတွေကိုပုံလေးတွေ
Posted by ZP.LINTAN at 3:19 AM
အသစ်ဘာမှမတင် နိုင်သေးလို့ အဟောင်းလေးနဲ့ သူငယ်ချင်း အားလုံးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ....
Posted by ZP.LINTAN at 1:02 PM
Posted by ZP.LINTAN at 11:15 AM
Tony Jaa Tom Yum Goong-Ong Bak
Posted by ZP.LINTAN at 8:05 AM
ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ထိုင်းမင်းသား Ong Bak-2
ပြန်စမ်းတာပါ မနေ့ကလိုကြာကြာ ခံမလားတော့ မသိဘူး။
ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ထိုင်းမင်းသား Ong Bak-1
Posted by ZP.LINTAN at 6:05 AM
တစတစနှင့် အရှုံးဘက်ကို နဲ့နဲ့ယိုင်လာပြီ...
နက်ဖြန် ဆိုတဲ့ အရာ
ရက်စက်စွာ ငါ က လိုက်ဦးမယ်......
Posted by ZP.LINTAN at 2:12 AM
ကျွန်တော်တို့ဟာ လက်ဝါးကပ်တိုင်အမျိုးမျိုးကို ထမ်းပိုးရင်း လူ့ဘဝလမ်းပေါ်မှာ ခက်ခက်ခဲခဲ ရှေ့ဆက်တိုးနေကြတယ်။ ဒီလက်ဝါးကပ်တိုင်ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ တာဝန်ဝတ္တရား စတဲ့အရာတွေ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ ဒီအရာတွေက လောကကြီးထဲ ကျွန်တော်တို့ရှင်သန်နေတဲ့ အကြောင်းပြချက်ဖြစ်တယ်၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တယ်။
လူတိုင်းလူတိုင်း လေးလံတဲ့လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို ထမ်းပိုးရင်း ရှေ့ကို နှေးနှေးကွေးကွေး၊ ခက်ခက်ခဲခဲ လှမ်းနေကြတယ်။
အဲဒီထဲက လူတစ်ယောက်ဟာ လမ်းခုလပ်အရောက်မှာ ရုတ်တရက်ရပ်လိုက်တယ်။ သူဘာတွေ တွေးနေမလဲ!
သူတွေးနေတာက ဘုရားသခင်... ဒီလက်ဝါးကပ်တိုင်က လေးလံလွန်းပါတယ်။ နည်းနည်းလောက် ဖြတ်ပစ်လိုက်မယ် ဆိုတာဖြစ်တယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို သူနည်းနည်းဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်။
တိုသွားတဲ့ လက်ဝါးကပ်တိုင်ကြောင့် သူပေါ့ပါးသွားတယ်။ ခြေလှမ်းတွေလည်း သွက်လာတယ်။
လျှောက်ရင်း လျှောက်ရင်း ကျောပေါ်က လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို အရမ်းလေးတယ်လို့ သူခံစားမိပြန်တယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ ဘုရားသခင်ကို သူပြန်ခွင့်တောင်းတယ်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို နည်းနည်းထပ်ဖြတ်လိုက်ရင် သူပိုပေါ့ပါး ပိုသွက်လက်လာမယ်လို့ဆိုတယ်။
လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို သူ ထပ်ဖြတ်လိုက်ပြန်တယ်။
ဘုရားသခင်ကို သူကျေးဇူးတင်မိတယ်။ သူ ပေါ့ပါးသက်သာသွားတယ်လို့ ခံစားမိလို့ဖြစ်တယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ သူဟာ အင်အားတွေ သိပ်စိုက်ထုတ်စရာမလိုဘဲ လူတွေရဲ့ရှေ့ဆုံးကို ရောက်သွားတယ်။ တခြားသူတွေ ခွန်အားစိုက်ထုတ်ပြီး ရှေ့ကိုဆက်တိုးနေချိန်မှာ သူက လေလေးတချွန်ချွန်နဲ့ ပေါ့ပါးလို့နေခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့ မထင်မှတ်ဘဲ ရှေ့ဆက်တဲ့လမ်းပေါ်မှာ နက်နဲကျယ်ဝန်းတဲ့ မြောင်းကြီးတစ်ခု ရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ မြောင်းပေါ်မှာ တံတားမရှိဘူး။ ဟိုဖက်ကမ်းကို ရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်တဲ့ ကယ်တင်ရှင်လည်း ရှိမနေခဲ့ဘူး။
သူ့နောက်ကလူတွေ သူ့ကိုတဖြည်းဖြည်း မီလာကြတယ်။ သူတို့က သူတို့လွယ်ပိုးထားတဲ့ လက်ဝါးကပ်တိုင်နဲ့ မြောင်းပေါ် တံတားလုပ်ပြီး ဖြတ်ကျော်ကြတယ်။
သူလည်း အဲဒီလို ကျော်ဖြတ်ချင်တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူခုတ်ဖြတ်လိုက်လို့ တိုသွားတဲ့လက်ဝါးကပ်တိုင်က တံတားအဖြစ်နဲ့ မြောင်းကိုကျော်ဖြတ်ဖို့ သူ့ကို မကူညီနိုင်ခဲ့တော့ဘူး။
တခြားလူတွေ မြောင်းကိုကျော်ဖြတ်ပြီး ဦးတည်ရာပန်းတိုင်ကို ဆက်သွားနေချိန်မှာ သူဟာ နေရာမှာတင်ရပ်ပြီး နောင်တတွေနဲ့ ခေါင်းငိုက်စိုက် ကျန်ရစ်နေခဲ့တော့တယ်။
လူတိုင်းမှာ ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို ထမ်းပိုးထားကြတယ်။ ရုပ်ပုံထဲက လူတွေကလည်း အဲဒီလိုပဲ.... ရှေ့မှာ တားဆီးထားတဲ့အရာ ပေါ်လာတဲ့အခါ သူတို့ကျောပေါ်က လက်ဝါးကပ်တိုင်နဲ့ အတားအဆီးကို ကျော်ဖြတ်ကြပြီး ရှေ့ဆက်လှမ်းကြတယ်။ ဒါကြောင့် သင်ကြားမှုတွေ လေးလံခက်ခဲတယ်၊ အလုပ်အကိုင် ပင်ပန်းတယ်လို့ မညည်းတွားပါနဲ့။ တကယ့်ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာ ကြိုးပမ်းပြီးမှ ရလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ ဆင်းရဲပင်ပန်းတာတွေ မတွေ့ကြုံ၊ မခံစားဖူးရင် ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့ တကယ့်အနှစ်ကို ကျွန်တော်တို့ ခံစားရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဒီပုံလေးတွေကို တွေ့ဖူးကြမှာပါ...း) http://www.duwenzhang.com/wenzhang/lizhiwenzhang/20101223/165598.html ကနေ မျှဝေပါတယ်။
Posted by ZP.LINTAN at 1:36 AM
ဒီနေ့တော့ နက်တိုင်လေး စည်းကြည့်ရအောင်.... ဒီလို ဒီလိုလေး
နိုင်းနိုင်းစနေမှ ယူလာတာပါ။အောက်ပုံကတော့ ဘယ်ဆိုဒ်က ယူမှန်းမသိတော့ဘူး။ဓာတ်ပုံတွေ ထားတဲ့နေရာ မှာထားတာ ပျောက်မှာစိုးလို့ ပေါင်းထည့်လိုက်ပါတယ်။ ဟိဟိ....
Posted by ZP.LINTAN at 12:39 AM
Posted by ZP.LINTAN at 5:12 AM
အကြီးကြီးဖတ်ချင်ရင် အပေါ်နားက Full Screen ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ပြန်ထွက် ချင်ရင်တော့ close ပေါ့။
http://www.sagarwarmyae.info မှ ရရှိပါသည်။
Posted by ZP.LINTAN at 11:07 AM
၀၂။ ပြဒါးတလမ်းသံတလမ်း - ဆွန်ကျဲအို
၀၄။ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ - ဆွန်ကျဲအို
၀၆။ နွေလမ်းခွဲ - ဆွန်ကျဲအို
၀၈။ နှလုံးသားရေးရာ - ဆွန်ကျဲအို
၁၀။ လမ်းနှစ်သွယ် - ဆွန်ကျဲအို
၁၂။ သိစေချင်တယ် - ဆွန်ကျဲအို
၁၄။ တသိမ့်သိမ့်ရှိုက်နေတယ် - ဆွန်ကျဲအို
ပျောက်လုလု ဆလိုင်းဆွန်ကျဲအိုရဲ့ သီချင်းတွေပါ... ကျနော် အရမ်းလိုချင်ခဲ့သော ဒီသီချင်းတွေကတော့ http://mmcybermedia.com/community/index.php?topic=42339.0 ဒီနေရာမှာ ရရှိတာပါ... ကျနော်မွှေနောက်ရှာဖွေ ပေမယ့်မတွေ့ပါ။ ဟိုးတနေ့ကပဲရှာဖွေရင်းနဲ့ ဒီဆိုက်ကိုရောက်ပါတယ်။ သီချင်းတွေ ဒွန်းတော့ ဖိုင်မရှိတာနဲ့ဖွင့်လို့မရဘူး။ သူငယ်ချင်းဆီအကူအညီတောင်းတော့ သူက ဒွန်းပေးပြီး အီးမေးမှာ ပို့ပေးတာ... ဆလိုင်းဆွန်ကျဲအိုကို ချစ်သော သူငယ်ချင်းများ အားလုံးနားဆင်လို့ရအောင် ဒီမှာပဲ ရတဲ့နည်းနဲ့ တင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒွန်းချင်ရင်တော့ မူရင်းဆိုက်မှာ သွားဒွန်းကြပါနော်။
mmcybermedia နှင့် ကျနော့ကို ကူညီသော ဆလိုင်းထန်းခွီရှိန်းကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း..........
Posted by ZP.LINTAN at 1:54 AM
Chin Music Videos MM-Musicmp3 စိုင်းထီးဆိုင် ဆလိုင်းဆွန်ကျဲအို သီချင်း
Posted by ZP.LINTAN at 1:07 AM
Cho Music Mp3 MM-Gospel Songs
၁။သီချင်းလေး တစ်ပုဒ်လောက်တော့ အသက်သွင်းလိုက်ချင်တယ်
ဒီလူဆူလိုက် ဟိုလူညံ လိုက်နဲ့ သံစဉ်တွေ ပျောက်လွင့်သွား
၂။ရည်းစားလေး တစ်ယောက်လောက်တော့ ထားလိုက်ချင်တယ်
ဒီလူဖျက် ဟိုလူရှုပ်လိုက်နဲ့ အခြေနေတွေ ဆိုးသွား
Cho...ဘာမှ ဘာမှ ဘာတစ်ခုမှ အဆင်မပြေဘူး
သီချင်းလေး တစ်ပိုဒ်လည်း ရင်ထဲမှာ ခံစားမယ်
ရည်းစားလေး တစ်ယောက်လည်း ရင်ထဲမှာ သိမ်းဆည်း/ထားမယ်
လောကကြီးမှာ အဆင်ပြေသလို ငါနေလိုက်တော့မယ်....
၃။ကောင်မလေး တစ်ယောက်နဲ့တော့ တွဲခဲ့ဖူးတယ်
ဒီလူပြောင်လိုက် ဟိုလူလှောင်လိုက်နဲ့ အနားကပ်လို့မရတော့ဘူး
ဟဲဟဲ....အခုတလော ခေါင်းထဲမှာလည်း ကဗျာတွေ ကုန်ပြီထင်တယ်... ဘာမှမရေးနိုင်တော့ ကျနော် အရင်တုန်းကရေးတဲ့ ပြဿနာ သီးချင်းလေးပဲ တင်ပေးတယ် .. လောလောဆယ်တော့ ကဗျာလိုပဲဖတ်လိုက်ပါ။ ခွေကလေးလုပ်ချင်ပေမယ့် ပိုက်ပိုက် အဆင်မပြေသေးလို့ တီးဝိုင်း ငှားနိုင်ဖို့ မလွယ် ဟီးးးးး။ ဟဲဟဲ...ထီထိုးတယ်နော်.... ထီပေါက်ရင်တော့ ချင်းသံ ဝဲဝဲနဲ့ အပေါစား ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် အလွမ်းသီချင်း အသည်းကွဲ သီချင်းလေးတွေ ဆိုပေးမယ် ဟိဟိ်။ အထင်တော့ မသေးလိုက်နဲ့ဦး ကျနော့ သီချင်းက ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်လေးတွေပါ ဟိဟိ။ ကော်ပီတော့ စိတ်မကူးဘူး။ ကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေထဲက သီချင်းလေးဆိုပေးချင်ရင်တော့ mp3တွေ သီချင်းကြမ်းလေး ပို့ပေးမယ်။ရောင်းတော့ ရောင်းမှာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ဘယ်သူမှ အင်တာမဗျူးတော့ ကိုယ့်ဟာကိုဗျူးတာပါ ဟိဟိ...စာလုံးပေါင်းမှားတာ တွေ့ရင်လည်း အားမနာနဲ့ ပြင်ပေးလို့ရတယ်နော်။
Posted by ZP.LINTAN at 9:12 AM
ဒီစာကိုတော့ မကန်ဒီတို့ ကျွန်တော်သိသမျှ မှတ်သမျှတို့ အတွက် ရေးပေးတာပါ ။ မဖြုတ်ထားချင်လို့ တမင်သက်သက် ထားတာလားတော့ မသိ :)
ရေးမယ် ရေးမယ် နဲ့ မရေးဖြစ်ဘူး ။ ခု မဖြစ်ဖြစ်အောင် ရေးပေးလိုက်ပြီ ။
ပထမဆုံး မိမိရဲ့ ဘလော့ဂ်ကို ဝင်လိုက်ပါ ။ ပြီးရင်...
Design> Edit HTML ကို အစဉ်လိုက်သွားပါ ။ Expand Widget Templates ကို အစက်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါ ။
Windows ပေါ်မှ Snipping Tool ဖြင့်အလွယ်ကူဆုံး Captu...